Xiriir miyaa ka dhexeeya darawalada baabuurta xamuulka ee Soomaalida iyo guursiga badan? - BBC News Somali
Image caption Baabuurta xamuulka
Darawalada baabuurta xamuulka waxay sheegayaan inay la kulmaan dhibaatooyin ay kamid yihiin inay soo jeedaan wakhti badan, hawada oo mararka qaar isbadasha, xayawaanaadka habeenkii waddooyinka mara oo shil geysan karo iyo aqoont la'aanta dalalka cusub ay baabuurta geeynayaan.
Cabdikariim Maxamed Jawaaze oo kamid ah wadayaasha baabuurta xamuulka ayaa BBC u sheegay inay galaan safar qaadanayo wakhti badan taasina ay ku reebtay hurddo la'aan.
"Saacadihii oo aad u fara badan, hurddo xumo, waddooyinkii oo mararka qaar cimilada isbaddasho, waxaa kamid ah xayawaanaadka habeenkii waddooyinka lagu jiiro, meeshi aad alaabta geyneysay oo aad waayi kartid maadama aad dal cusub aad joogtid" ayuu yiri Cabdikariim.
Waxaa jiraa warar aanan la hubin oo sheegayo in darawalada baabuurta xamuulka ah ay goobtii ay tagaanba ka guursadaan , su'aashaas waxaan hordhignay Cabdikariim oo kamid ah darawalada.
"Laakiin sida runtii markii aan galay waxaan ogaaday in howshaas aysan suurtogal aheyn gaar ahaan qolyahan labada waddan u kala goosho..way adagtahay in aad hesho fursad aad magaalada ku dhexgasho oo aad reer ku dhisato ama aad cid ku raadsato" ayuu yiri Cabdikariim.